Masar oo cagta saartey wadadii Aljeeriya iyo Ciraaq.Weeraro Isqarxin ah oo lagu qaadey saldhigo ciidamada dowlada Masar Leeyihiin – idalenews.com
Masar oo cagta saartey wadadii Aljeeriya iyo Ciraaq.Weeraro Isqarxin ah oo lagu qaadey saldhigo ciidamada dowlada Masar Leeyihiin
Ugu yaraan 9 kamid ah askarta ciidamada Amaanka ee dalka Masar ayaa ku dhintay weeraro bambaano oo lala beegsaday dhowr saldhig oo ay leeyihiin ciidamada dowlada Masar.
Weeraradan oo intooda badan ka dhacay gobalka Suweys iyo Sinaay, ayaa la rumeysan yahay inay ka danbeeyeen kooxaha mayilka adag ee kasoo horjeeda dowlada Masar. Waxay sidoo kale weeraro ka dhaceen magaalooyinka Ismaaciliya iyo Qaahira.
Kooxo hubeysan ayaa burburiyey gaari ay wateen ciidamada amniga ee roondada ku mara magaalada Ismaaciliya, halka magaalada Qaahira, dabley hubeysan ay hubka baasuukaha ku dhufteen qeybo kamid ah xarunta Telefishinka Setelitka ee dowlada Masar.
Weeraradan ayaa kusoo beegmaya labo maalin kadib markii ay dalkaasi Masar ka dhaceen rabshado ay ku dhinteen in ka badan 50 qof.
Maalinimadii Axadii oo dalkaasi Masar laga xusayey dagaalkii horaantii todobaataneeyaha dhexmaray Isra’iil, Masar iyo Siiriya, ayaa waxaa barbar socday banaabaxyo ay dhigayeen shacabka kasoo horjeeda afgembiga militariga dalkaasi ku sameeyeen xukuumadii la doortay ee Madaxweyne Maxamed Morsi.
Alshabaab oo baaritaano Baraawe ka wada iyo Mareykanka oo shaki ka muujiyey in sirta weerarkii Baraawe ay ka baxday dhinaca dowlada Federaalka